"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : ၅၀။ Adobe Flash Player ကဲ့သို့သော Software များကို Download လုပ်နည်း
၅၀။ Adobe Flash Player ကဲ့သို့သော Software များကို Download လုပ်နည်း
လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့် ၄ ဆင့်
အောက်ပါပုံပေါ်လာသည်နှင့် Save File တွင့် Click နှိပ်ပါ
Downloads လုပ်ပြီးသွား၍ အောက်ပါကဲ့သို့ Pop Up Menu ပေါ်လာပါက အပြာရောင်ပြထားသောနေရာမှာ Double-Click နှိပ်ပါ
အောက်ပါ Dialog Box ပေါ်လာပါက Run. တွင် Click နှိပ်ပါ
အောက်ပါ Dialog Box ပေါ်လာလျှင် Yes. တွင် Click နှိပ်ပါ
ဤနည်းသည် Adobe Flash Player အတွက်ဖြစ်သော်လည်း သင် Mozilla Firefox ကိုသုံးနေသမျှ ဤနည်းသည် အခြားသော Software များကို ဒေါင်းယူရာ တွင်ပါ အသုံးဝင်သည်။ သင်သတိထားရမှာကတော့ သင်သုံးနေသော Browser ကဘယ်အမျိုးစားကိုအသုံးပြု
နေတာလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် Chrome နှင့် IE တွင့် ဤနည်းမဟုတ်ပါ။
မြန်မာတွေဟာ မော်ဇီလာ နဲ့မကင်းကြပါဘူး သို့သောလည်း Chrome က ပိုမြန်ပါတယ် Chrome မှာမြန်မာစာ ဖတ်နည်းကိုလည်း ဒီ ဆိုဒ်ထဲမှာထဲ့ထား ပြီးပါပြိ။